एकजना मुसहर र आफ्नै मालिकको छोराको नाम कसरी एउटै राख्नु ? मुसहर युवाले आफ्नो छोराको नाम रैता राख्यो । रैता, जो कहिल्यै बोर्डिङ स्कुल जाने छैन । वकिल बन्ने छैन । यो हाम्रो लोकतन्त्र भित्रको निर्मम सत्य हो । आज पनि मधेसमा मुसहरहरूलाई नवलकिशोर, जुगल किशोर र युगल किशोर भनेर बोलाइँदैन । उनीहरूको नाम हुन्छ– नब्ला, जुग्ला, जुग्ले, युग्ला । सरकार हाम्रो लोकतन्त्रमा किन युगल– युग्ले बन्छ ? जुगल– जुग्ले बन्छ ? रोहित– रैता बन्छ ? महोत्तरीमा क्रियाशील एकजना सामाजिक कार्यकर्ता भन्छन्, ‘सरकारको एक वर्ष रैताहरूका लागि फगत भ्रम हो ।’